China Mandarin Orange mpamokatra sy mpamatsy | Heritage
Ny voasary mandarin vaovao dia avy any Huangyan miaraka amin'ny vokatra Geographic Indication. Mampiasa ny akora malaza indrindra izahay mba hiantohana ny kalitaony.
Voasary huangyan, mamy sy marikivy antonony, tsiro malefaka, tsy misy voa; Mpisava lalana amin'ny lova amin'ny volotsangana volomboasary vita amin'ny tànana, amin'ny alàlan'ny fanitrihana mangirana amin'ny mari-pana ambany, hahazoana antoka ny asidra sy ny Manitra manokana ary ny tsiro tsy manam-paharoa.
Hatramin'ny nanombohany, nahasarika ny sain'ny mpanjifa anatiny sy vahiny izany, ary koa niteraka fisondrotana fakan-tahaka. Kalitao tsara, teknolojia tsara, mahazaka ny fitsapana amin'ny tsena sy ny safidin'ny mpanjifa. Ny toetra mampiavaka ny lova - ny voadio voasary nendahana tamin'ny tànana dia tsy mivadika, henjana ny nofo, matsiro mamy sy marikivy, hena volomboasary nofonosina mesocarpon volomboasary dia hita miharihary, ary ny tahan'ny vokatra dia 10% fotsiny, ny butikety tsirairay. Tsy lany andro ny tsy fahazoana rano, ary koa ny fifidianana ny dite voankazo voalohany.
Tombontsoa ara-pahasalamana an'ny voasary mandarin
Ny voasary voasary, fantatra koa amin'ny hoe mandarins na mandarines, dia voankazo voasary miaraka amin'ny voasary, voasarimakirana, limes, ary grapefruit. Raha ampitahaina amin'ny voasary mahazatra, ny voasary mandarin dia kely kokoa, mamy kokoa ary mora mipoitra.
Tangerines dia karazana mandarin miaraka amin'ny loko mena sy volomboasary mena ary hoditra malemy. Clementines dia karazana voasary mandarin kely tsy misy voa izay malaza satria mora miendaka izy ireo ary mamy be.
Ny voasary voasary dia niorina tany Sina taloha ny tantarany. Ny anaran'izy ireo - mandarin - dia porofon'izany koa. Na izany aza, nanomboka ny fiandohany dia voankazo malaza izy ireo ary be mpitia. Androany izy ireo dia mijanona ho fanampin'ny ankohonana maro. Izy ireo koa dia manome tombony samihafa amin'ny fahasalamana.
Tsy ny mandarina ihany no mamy sy mora karakaraina, fa feno vitamina sy mineraly ary antioksida koa. Mila ireo singa ireo ny vatanao mba hijanona ho salama. Ireto misy tombony vitsivitsy azonao amin'ny fihinanana an'io voankazo kely matsiro io.
Fanoherana ny aretina
Beta-carotene sy beta-cryptoxanthin dia fitambarana manome voankazo voasarimakirana toy ny tangerine sy mandarins ny lokony volomboasary. Izy ireo dia antioxidant izay mety hanampy amin'ny fampihenana ny mety hampidi-doza homamiadana sasany.
Ny voasary mandarin dia manana beta-carotene sy beta-cryptoxanthin betsaka kokoa noho ny voasary mahazatra, ka mahatonga azy ireo ho fanampiny tsara amin'ny sakafonao.
Ny vatana dia mamadika ny beta-carotene sy beta-cryptoxanthin ho vitamina A, izay tena ilaina amin'ny hery fiarovan'ny vatana salama, fahitana tsara ary fitomboana sy fivoarana ara-dalàna.
Ny voasary Mandarin dia loharano vitamina C tena tsara koa, sakafo mahavelona iray hafa ho an'ny hery fiarovan'ny hery fiarovan'ny vatana, ary koa mitazona ny hoditra salama sy ny ratra manasitrana. Ny vitamina C amin'ny sakafo dia zakan'ny vatana tsara kokoa noho ny otrikaina C vitamina C azonao amin'ny famenony.
Mino izahay:Ny fanavaozana no fanahintsika sy fanahintsika. Ny fiainana avo lenta no avo lenta.
Professional Mandarin Orange, Ny orinasanay dia miasa amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny fiasa "miorina amin'ny fahamendrehana, ny fiaraha-miasa noforonina, ny olona mifantoka, ny fiaraha-miasa mandresy". Manantena izahay fa afaka manana fifandraisana am-pihavanana amin'ny mpandraharaha avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Teo aloha: Cantaloup
Manaraka: Voasary mena aty
Voasarimakirana Mandarin Orange
Voasary voasary mandarin maina
Voasary mandarin maina
Voasary mandarinina main'ny paradisa